स्वास्थको लागि धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ अंगुर । त्यहि माथि कालो अंगुरको त झन् कुरै छोडुम । कालो अंगुर खाँदाका फाईदाहरु थाहा पाउनुहोस् - ज्ञानविज्ञान
स्वास्थको लागि धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ अंगुर । त्यहि माथि कालो अंगुरको त झन् कुरै छोडुम । गर्मि मौसममा कालो अंगुर स्वास्थको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ ।
थाहा पाउनुहोस् कालो अंगुरका यी फाईदाहरु
यस्ता राेगसँग लड्ने क्षमता प्रदान गर्छ कालो अंगुर सेवन गर्नाले
कालो अंगुर एउटा यस्तो फल हो जसलाई केटा केटी देखि बृद्ध समेतले खान मन पराउछन् । यो खादा गुलियो हुन्छ तर यसमा चिनीको मात्र कम हुन्छ । अंगुर सेवन गर्नाले विभिन्न रोगबाट छुट्कारा पाइन्छ । जस्तैः
माइग्रेन भएपछि टाउकोको आधी भागमा पीडा हुन थाल्छ । अंगुर खाएमा माइग्रेनको पीडा हराउँछ ।
शरीरमा रगतको कमी हुन नदिनका लागि दिनदिनै खाली पेट अंगुर खानुहोस् ।
याे जानकारी पनि एकदमै महत्त्वपुर्ण छ जानिराखाैँ
आँखामुनि कालो घेरा किन बस्छ ?
आँखाको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा देख्न नसक्नेलाई थाहा हुन्छ । तै पनि आँखा मानव जिवनको लागि निकै महत्वपुर्ण र नभई नहुने अंग हो । आँखाको ज्योती राम्रो बनाउन घरेलु खानेकुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
आँखा कमजोर हुने कारण खानेकुराले गर्दा पनि हो । त्यसकारण घरमै पाइने यी सामग्रीबाट प्राकृतिक रूपमै आँखाको ज्योति राम्रो बनाउनुहोस ।
Don't Miss it पानी पिउनु स्वास्थ्यकाे लागी राम्राे हाे तर आवश्यक भन्दा धेरै पानी पिउदा यस्ताे असर पर्छ । एकदिनमा स्वस्थ मानिसले कुन बेला, कसरी र कति पानी पिउनु पर्दछ ? जान्नुहाेस्
Up Next जाडो याम सकिएपनि गर्मी बढेको छैन । चिसो मौसममा हाड जोर्नी दुख्छ, खासगरी प्रौड उमेरका व्यक्तिलाई । युरिक एसिड कसलाई, किन र कसरी हुन्छ ?